အနုပညာအိမ်လေး: ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သူ စာရင်း ရယူရန် မိတ္တူကူးစက် သယ်ဆောင်သွားရန် မလိုတော့ ဟု ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သူ စာရင်း ရယူရန် မိတ္တူကူးစက် သယ်ဆောင်သွားရန် မလိုတော့ ဟု ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
မန္တလေး၊ မတ် ၉
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် မြို့နယ် ကော်မရှင် ထံမှဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်
ခွင့် ရှိသူများ စာရင်းကို ရယူရာတွင် မိတ္တကူးစက် သယ်ဆောင် လာရမည် ဆိုသည့် အချက်မှာ မှားယွင်း နေ
ကြောင်းနှင့် ယင်းအချက်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ထံ ပြန်လည် မေးမြန်းပြီး နောက်တွင် မြို့နယ် ကော်မရှင် မှ မိတ္တကူးစက် ယူဆောင်လာရန် မလိုတော့ ဟု ပြောကြားကြောင်း ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သန်းထိုက်ဦး က ပြောကြားသည်။
" ခင်ဗျားတို့ ဂျာနယ် မှာ မိတ္တကူးစက် ယူလာရမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို တွေ့တယ်၊ ဒီကိစ္စကြီးက အဓိပ္ပါယ်မရှိ
ဘူး ထင်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းကို ထံ ဖုန်းဆက် မေးမြန်းတော့ အတွင်းရေးမှူးက တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံ ထပ်လွှဲပေး ပါတယ်။ အဲဒီ တာဝန်ရှိသူက ကျွန်တော့်ကို မနက်ဖြန် မြို့နယ် ကော်မရှင်ကို သွားလိုက်ပါ၊ ဘာမှ ယူမသွားပါနဲ့ လို့ ပြောပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ဘာမိတ္တကူးစက်
မှ မသယ်ဘဲ မဲစာရင်းတွေ ရခဲ့ပြီ၊ ပါတီတစ်ချို့ ကတော့ အလုပ် မရှုပ်ချင်လို့ မိတ္တကူးစက်တွေ မီးစက်တွေ သယ်သွား ကြတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ ပါတီတွေကို ဝန်ထုပ်ဝ န်ပိုး ဖြစ်စေတယ် ထင်လို့ ကော်မရှင် ဆီ တိုင်တာ " ဟု ဒေါက်တာ သန်းထိုက်ဦးက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပါတီများသည် မဲစာရင်းကို မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် ရယူရမည် ဆိုသည့် ညွှန်ကြားချက် မှာ မိတ္တကူးစက် သယ်ဆောင်သွားရန် မဟုတ်ဘဲ ပါတီများ အနေဖြင့် မဲစာရင်းကို မိတ္တူဆိုင် သွားရောက် ကူးယူသည့် စရိတ် နှင့် ကူးခကိုသာ ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ သွားရောက် ကူးယူရာ
တွင် မြို့နယ် ကော်မရှင် မှ မဲစာရင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး လိုက်ပါရန် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြော
" ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲ လုပ်ပါတယ်။ ဒါလေးတော့ စီစဉ်ပေးလိုက်လို့ ညွှန်ကြားရင် စီစဉ်ပေးလိုက် ပါတယ် " ဟု မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ (အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)) က ဆိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော် တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပညာပေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် SNDP ပါတီမှ ကြိုတင်မဲ ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပြီးနောက်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် မှ ပါတီများ အနေဖြင့် မြို့နယ် ကော်မရှင်ရုံးတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ ၏ စာရင်းကို ရယူနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
မအူပင်မြို့နယ်၊ ထနှီးကျေရွာတွင် ရွာသားများ ထိုင်သပ...
လူအုပ်စုဖြင့် မဲရုံကို ဝိုင်းထားသဖြင့် ညတွင်းချင်း...
ကြိုတင်မဲ မပေးရပေမဲ့လည်း မဲပြားတစ်ပြား ဆုံးရှုံးမှာ...
ပခုက္ကူခရိုင်မှ ကြိုတင်မဲ မသမာမှုများ
၀ါးသိင်္ခရွာရောက် လူထုခေါင်းဆောင် ခရီးစဉ်မှ နောက်ဆု...
၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက မဲ ထည့်ခဲ့ရပေမယ့် အခုကြားဖြတ် ရေ...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ဟု ဒေါ်အေ...
NLD ကို မဲ ပေးဖို့ ပခုက္ကူ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စာ...
ထွန်းလင်းတောက်ပလာတော့မည့် ခေါင်းဆောင်လေးများ- Kyaw...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မြို့လုံးကျွတ် အ...
ဦးအောင်သောင်း၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ယာဉ်တန်းမှ တိုက...
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်ခရိုင် ဖျာပုံမြို့နယ်အတွင်း နော...
ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုညပိုင်းအထိ မဲဆွယ်နေတဲ့ ဒီချုပ် အ...
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်ကို မသွားမီ ရုံးချုပ်ကို ရောက်ရှိ...
ဧပြီ ၁ ရက်မှာ ဆန္ဒအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ဖို့ အချိန်တန်ပြ...
အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦး ဒေးဒရဲမြို့နယ်အတွင်းေ...
ဆွမ်းကပ် လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ လူငယ်ကွန်ယက် ဖွံ့ဖြိုးမှု...
တိုင်ရီအလုပ်သမားများ လုံခြုံရေးရဲများ၏ အကြမ်းဖက်ခံ...
ကလောမြို့နယ်မှ PNO ပါတီစည်းလူထုတွေ့ဆုံပွဲ ကန့်သတ်မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပိုစတာများ တည်ဆဲဥပဒေအရ ဆောင်...
ကော့မှူးမြိုနယ် မှာ ပြည်ခိုိင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေက ခဲ...
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၊ဆရာမများ နှင့် ကျောင်းဝန်ထမ်း...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ဟု ဒေါ်အော...
တောင်ငူNLDကိုယ်စားလှယ်လောင်းကား လေးဂွဖြင့် ပစ်ခံရ
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ... လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျ...
မတရားလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့ဆက်မည်
ဦးတင်ဦး ဒေးဒရဲခရီးစဉ် မိန့်ခွန်း (အသံဖိုင်)
အင်းစိန် ပေါက်တော မီးပွိုင့်ထောင့်မှ အိမ်ကို စသုံး...
မနန်းဝိုးဖန်း ၏ ရုပ်အလောင်းကို စစစ မှ တရက်စော သဂြိ...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြ...
နေအိမ်အတွင်း ဗလီဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသည့်အတွက် ကျောက်...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ၈၈ မျိုး...
နေ့စဉ် လှုပ်ရှား အသက်ဝင်နေတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်က ဒီချုပ်ရ...
အဖွဲ့ချုပ်မှ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ပါတီဝင်သစ်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ငွေကြာယံ...
VOTE NLD ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကို မဲပေးပါ(...
NLD ရွေးကောက်ပွဲ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေး တာဝန်ခံ ဦးသိန်...
ပဲခူးတိုင်း ဥဿာမြို့သစ်မှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ NLD ရုံးခန...
ပုဗ္ဗသီရိတပ်နယ်အတွင်း ကြံ့ဖွံ့ကို ကြိုတင်မဲ ပေးပြီး...
နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများပါ ကြံ့ဖွံ့ ကိုယ်စ...
ဦးဝင်းတင် မုံရွာခရိုင် အောင်နိုင်ရေးခရီးစဉ်
ပုလဲမြို့ NLD အောင်နိုင်ရေး ဖျော်ဖြေပွဲ ပရိတ်သတ်ထေ...
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ၂ ရက်အလို NLD သတင်းစာရှင်းလင...
ကျန်းမာရေးကြောင့် နေအိမ်တွင် ရက်အနည်းငယ်အနားယူခဲ့ရ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများကို ဂြိုလ်တုမှ သတင်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကာ သ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုအေးအောင်မိသားစုအား အရှင်ဝီ...
ရွေ့ ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများ ကားမှောက်သေဆုံး
တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ မူးရစ်ရမ်းကားနေတဲ့ ကျေးရွာ ဥက...
ကမ္ဘာကို မှတ်ကျောက်တင် ခံမယ့်ပွဲ
မျိုးဆက်သစ်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်လေးများ - Kyaw...
‘စနစ်ဆိုးနဲ့ စစ်ဂျိုးခွါစို့’ သံချပ် ထွက်ရှိ (သီချ...
ကုလ၏ ဒုက္ခသည် ထောက်ပံ့ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရတပ်ဖွ...
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လေးဖြူ သတင်း လုပ်ကြံ ခံရခြင်...
Election Monitoring Network နှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်...
သီးခြားဘတ်ဂျက်ရရှိရန် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အား ...
စင်္ကာပူတွင် ဖျော်ဖြေသွားသော မေဆွိ
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်ခရိုင် ငသိုင်းချောင်းမြို့နယ် က...
ဒလမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်၊ကျေးတွေမှာ NLDရုံးခန်းသစ်မ...
အနုပညာရှင်များ ၏ စစ်ကိုင်းမြို့ စည်းရုံးရေး သီဆိုေ...
စ၊ လယ်၊ ဆုံး ပေးဆပ်မှုများ - Kyaw Thu
မဲဆွယ်ရာတွင် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဓာတ်ပုံ နှင့် သတင်း ကိုက...
၂၇ ရက်နေ့က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်...
မော်လမြိုင်တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ လေးထောင်ခန့် တိုးလ...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ...
လှည်းကူးမြို့နယ် NLD လူထု အစည်းအဝေးပွဲ ( ရုပ်သံ-သတ...
၈၈ မျိုးဆက်များ ၂၀၁၅ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ...
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဟု ထုတ်ပြန...
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်ြ...
လှိုင်သာယာလယ်သမားများ နစ်နာကြေး ရရန် ငြိ်မ်းချမ်းစွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး မကွေးမြို့တွင် ဆုတော...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၏ မီ...
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မြစ်ဆုံ အရေးကိစ္စမ...
မဲရုံအတွင်းသို့ သတင်းမီဒီယာ သမားများ ဝင်ရောက်ခွင့်...
စစစ မှခေါ်ယူစစ်ဆေးနေစဉ် သေဆုံးသူမိန်းကလေး၏ မိသားစုဝ...
မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ...
ထမင်းစားလက်မှတ် သင်တန်းဆင်းပွဲ - Kyaw Thu
လာရောက်ရှင်းလင်းခြင်း မရှိသေးသည့် စစ်ကျန်ဗုံးတလုံး...
ဆရာမြင့်မောင်မောင်နဲ့ မောင်မောက် တို့ရဲ့ကွယ်လွန်ြ...
အခက်အခဲတွေကြားက ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ချည်မျှင်နဲ့ အထည်...
တွံတေး လူငယ်များ စုစည်း တည်ထောင်ထားတဲ့ Care For Ch...
၆၇ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ် တော်လှန်းရေးနေ့ အခမ်းအနား ( ရ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်း၏ ဖခင်ကြီး ဈာပန ( ...
ကြယ် နှင့် ခွပ်ဒေါင်း တံဆိပ်သာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ...
မြင်းခြံ NLD အောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံကိုြ...
အစိုးရအဖွဲ့က ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ပြပြီး သွယ်ဝ...
၂၈-၀၃၀၂၀၁၁ ရက်နေ့နေပြည်တော် ကော်မရှင်ရုံးတွင် ပြုလ...
တရုတ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပို...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လှည်းကူးမြို့နယ်) ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူ မနီလာသိန်း ရဲ့ အဖေ ဈာပန အခမ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ြေ...
NLD ကြေညာချက် အဓိပ္ပါယ် လွဲမှားနိုင်ဟု KIO ပြော
နာဂစ်ဒဏ်ခံ လပွတ္တာ လူငယ်များအတွက် မဇ္ဈိမအလင်း ( ရုပ...
ဒေါ်လာ သန်းချီ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ သီလဝါဆိပ်ကမ်း မီးလောင...
မဟာမုနိ ပြတိုက်မှ ရှေးဟောင်း အမြောက် (၂) လက် နေပြည...
(၆၇) နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ (တပ်မတော်နေ့) အထိမ်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးက...
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန...
ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့တဲ့ ဒေါ်ဖြူ...
အိမ်ထောင်စု (၄၈) စုရဲ့အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့် အခက်အခဲ...
ကလေးငယ် နှစ်ဦးအား တွေ့ရှိပါက ကူညီ အကြောင်းကြားပေး...
မကွေးမြသလွန်စေတီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာစေဖု...
ကျွန်းစုမြို့ နယ် ပထက်ကျေးရွာမှာ ကြံ့ဖွံ့ ကိုယ်စား...
၆၇ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား အမျို...
လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို တင်ပြတဲ့နေရာမှာ မီ...
မတ်လ (၂၄)ရက်နေ့က စသုံးလုံးမှ နေ့ညမနား မတရားစစ်ဆေးတ...
၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ၏ တော်လှန်ရေးနေ့ မိတ...
စသုံးလုံးတွင် စစ်ဆေးနေစဉ် ရုံးအပေါ်ထပ်မှ ပြုတ်ကျသေဆ...
သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း မန်နေဂျာ မီးသတင်းလာယူသူ သတင်းထောက်မ...
လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရ...
မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ဒီချုပ်မှ သင်တန်းပ...
မျိုးချစ်မြန်မာများ ၏ မျိုးချစ်ဂုဏ်ရည်ဆု - Kyaw T...
မှုခင်းလိုက် သတင်းသမား တစ်ဦး သတိပေးခံရ
ခြိမ်းခြောက်တိုင်း မကြောက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ေ...
သံဃာတော်တပါး NLD ကို မထောက်ခံဖို့ နေ့ စဉ် အသံချဲ့ ...
စသုံးလုံး မှ စစ်ဆေးစဉ် မနန်းဝိုဖန် အသက် ၁၉ နှစ်မှ...
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ NLD မှ ...
ယနေ့( ၂၆-၃-၂၀၁၂)ခုနှစ် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇း ၃၀ အ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်...
လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်စားနေတဲ့ ကျေးရွာ...
ကြိုတင်မဲ ပေးမယ့်သူတွေ အတွက် ရက်သတ်မှတ်ပြီ
အဖြူရောင် တွဲလက်များ အဖွဲ့ရဲ့သတင်းမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ...
အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် အိမ်ရှင်မဂျာနယ် တော်ဝင်နှင်းဆ...
ဒံပေါက်ကျွေးပြီး ဘုရားဖူး ပို့ပေးမည့် ကြံ့ဖွံ့
ကလေးစစ်သား အဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားရာ မှ ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့...
အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်း
သန္တိသုခ ဓမ္မာရုံ ဓမ္မသဘင်တွင် ဦးဝီရသူ တရားဟောကြား
သတင်း သမားများ၏ လွတ်လပ်ခွင့် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ နိုင်/ကျဉ်းမိသားစုတွေကို တွေ့ဆုံ...
မရမ်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်း မဲစာရင်း နောက်တိုးပြင်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဟောပြောရန် ၀န်ခံလက်...
အာရုံစိုက်လာရသည့် နေပြည်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ် မဲစာရင်းအခြေအနေ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်က NLDပါတီဝင်အား ခြိမ်းခြောက်ေ...
" တိုင်းပြု ၊ ပြည်ပြု လွှတ်တော်သို့ သွားရာလမ်း " "...
ဝိပဿနာ တရားတော်နှင့် အညီ - Kyaw Thu
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မရှိေ...
ကျောက်ပန်းတောင်း ဒေသခံများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန...
တရုပ် Gas ပိုင်းလိုင်း Project တွင် လာရောက် လုပ်ကိ...
မတန်မရာ ငါးကြင်းခေါင်းကို မိသလိုဖြစ်ပြန်ပြီ အကြောင...
အစိုးရနှင့် ကေအန်ယူအကြား ယုံကြည်မှု ခိုင်မာလာ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတင်းစာရှင်းလင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဒေါက်တာတင်မျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့မှ ပြန်ရောက်ပြီး နေအိ...
မန္တလေး ကြံ့ဖွံ့ တဦး ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဒေါ်စု ဓါတ်ပု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့ သို့ရောက်ရှိ ကျန်း...
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် မကွေးမြို့နယ် မဲဆွယ်စည်းရ...
" Facebook မဲဆန္ဒနယ် " Facebook ပေါ်ကနေ မဲပေးကြမယ်
ပခုက္ကူမြို့ပေါ်ရှိ စက်ရုံအလုပ်သမား နှစ်ထောင်ကျော် စ...
'ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း ပြည်ခ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ဆောင် ပဏမ ၁၄ ဦး ရွေးချယ်
မတ်လ ၂၇ ၊ ၂၈ ရက်များတွင် သွားရောက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်...
ယနေ့ နံနက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့် ခွ...
NLD ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးသီချင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေမကောင်းသဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေ
ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ပတ်သက်သောထူးခြားသည့် သတင်း အချက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျွန်းစုမြို့နယ် စခန်းသစ်ကျေးရွ...
NLD ရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေရေး...
နာယကကြီး ဦးတင်ဦး ဧရာဝတီတိုင်း စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ည ၁၀ နာရီခန့် မှာ စခန်းသစ်ကျွန်...
ဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း မဲဆ...
ပုသိမ်မြို့မြို့တော်ခန်းမမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေးအခြေအ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်-ကျွန်းစု ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမှုဆောင်အဖွဲ့အသ...
မသန်စွမ်းသူများ အတွက် စာပေဟောပြောပွဲ ကိုမင်းကိုနို...
၈၈ မျိုးဆက်များရဲ့ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့...
၀န်ချတောင်းပန်ရန် လယ်/ဆည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား လွှ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄၈ ...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်...
ပုသိမ်မှာ ပါတီတွေအပြိုင်အဆိုင် မဲဆွယ်ကြပြီ
စစ်ကိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အောင်နိ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျွန်းစုမြို့ က...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့ ရောက...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီေ...
ကြိုတင်မဲ စနစ်ကျစေရမည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကတိ...
မော်လမြိုင်မြို့ မဲရုံတိုင်းတွင် ကိုယ်စားလှယ် ထားမ...
ကောင်းမှုပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသော ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းသည့် မဲဆန္ဒနယ်များစာ...
တာချီလိတ်မြို့တွင် ဂေါက်ကွင်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ရန်ြ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အရေးပေါ်ညီလာ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည်...
ဂရုဏာရှင် အမျိုးသမီးများ မှ ဦးဆောင်ပြီး ဆုတောင်းေ...
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မညီသည့် အစိုးရ လုပ်ရပ်များ လွှတ်တေ...
ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေစစ်ပါတီ ၁၀ ပါတီ စုပေါင်းမဲဆွယ်လှုပ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ဗုဒ္ဒဓမ္မ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်...
လက်နက်တွေ လက်ပ်တော့နဲ့ လဲဖို့ လိုအပ်သလို ကျောင်းသာ...
ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရဖို့ြ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အလွှာ အသီးသီး မှ ...
ငဝန်မြစ်အတွင်း မှ ပုသိမ်သူ၏ ကြမ္မာ ( ဓာတ်ပုံ-သတင်း ...
မြန်မာ့ သယံဇာတ ကျိန်စာ...( ဓာတ်ပုံ-သတင်း )
၈၈ မျိုးဆက် ၏ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ကွန...
ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်တွင် ကြိုတင်မဲများ...
23-03-2011 ရက်နေ့ ( Facebook ) မှ သတင်းတိုများ စုစ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မ...
ကံဆိပ်ရွာအနီး င၀န်မြစ်အတွင်း ရှပ်ပြေးအမြန် ရေယာဉ်တ...
ဟင်္သာတမြို့မှာ မကြာမှီ ဖွင့်လှစ်မယ့် MAX ဦးဇော်ဇော...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး သိစေရန်.. ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးခ...
မဲရုံများ ပြန်ဖွင့်ပေးရေး ဖားကန့် ရွေးကောက်ပွဲကော်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ကော့မှူး စည...
ကြံမစိုက်ချင်ပဲ စိုက်ပျိုးနေကြရတဲ့ ရေတာရှည် လယ်သမာ...
အမေစု နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို ချီတက်ထောက်ခံ ကြတဲ့ လှည်းက...
မြန်မာ့ မီဒီယာများ အရည်အသွေး ပိုမြင့်ရန် အဆင်သင့် ...
NLD အတွက် မကွေးတိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင် ရဲထိုက် မဲဆွယ်...
၂၀၁၂ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး သတ္တိရှင်များဆု မဇင်မာအေ...
ရွေးကောက်ပွဲ သည် ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်သည်ဟု ပြည်ခိုင်...
တချို့အဖွဲ့လေးတွေက ငွေလိုက်ချေးနေတယ် လိုအပ်ရင်ချေ...
မွန် အမျိုးသားကျောင်းအချို့ကို မွန်စာပေ နှင့် ယဉ်ေ...
အကျဉ်းကျ သံဃာများ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်း ၀တ်ပြု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ ကော့မှူးမြို့ နယ်ကို ခရီးထ...
မြန်မာ့ လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ လွှတ်တော်သမဂ္ဂ ၀င်ရန် ဆ...
ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂမှ ပထမဦးဆုံး ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ ကမ...
ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ် မဲဆွယ် တဲ့ ပုသိမ် ကြံ့/ဖွံ့ ဦး...
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မရားလုပ်ဆောင်မှုများ NLD ကြေညာခ...
ညီညွတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးအုန်းလွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ...
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ် ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတ...
လက်ကျန် ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဝတ...
နိုင်ငံပြု အတွေးအမြင်များ ဆုံဆည်းရာ
စာပေစီစစ်ရေးမှ ဖော်ပြရန် ခွင့် မပြ သဖြင့် WEEKLY E...
ကွန်ပျူတာ Laptop တွေမှာ Driver Software တွေ အခမဲ့ ...
ကျိုက်ခေါက်ပွဲ နောက်ဆုံးည သီးလေးသီး ကပြခွင့် ပိတ်ပ...
ဧရာဝတီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင် မြောင်းမြ...
သင်းချိုင်းကုန်း နဲ့ သောင်ပြင် မှာတောင် လူထုဟောေ...
အမေ အောင်ဆန်းစုကြည် ဝင်ပြိုင်မည် ( တေးသီချင်း )
ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လေးခွဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
ILO နှင့် မြန်မာအစိုးရ နားလည်မှု စာချွှန်လွှာ FTUB က...
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဘုရားသုံးဆူမြို့...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ မှတ်ပုံတင် အထူးလုပ်ေ...
မကြာမီ ပြဋ္ဌာန်းတော့မည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာ ဥ...
လာမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တန့်ဆည်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၌ြ...
ရွာလမ်းပိတ်တဲ့ မှော်ဘီ အမှတ် (၆) စစ်မြေပြင် ဆေးတပ်...
လူငယ် ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ စုစည်း ...
နိုင်ငံတော်မြေများကို အစိုးရအဖွဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အုပ်ခ...
NLD မဲဆွယ်နေသည့် နေရာကို ကြံ့ဖွံ့က ရှို့မီးနဲ့ ပွဲလ...
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည် အုတ်ဂူနှင့် ဗိသုကာပညာရှင် ...
တရုတ်-မြန်မာ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် လုပ်ကို...
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး၏ ပေးစာ
မသန်မစွမ်း ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ရခိုင်စည်ေ...
ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်မှု ရှိဖို့ သင်တန်းပေးသူ ပြည်န...
ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းများ - Kyaw Thu
မြ၀တီမြို့ အာဇာနည် ကျောက်တိုင် နှင့် ကျောက်တိုင်ြေ...
မဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကြက်ဆူစိုက်ခင်း အစား ပဲစင်းငုံ စိုက်...
ရေညှိဆေးပြား ထုတ်ဖို့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက စစ်ကိုင်းတု...
ကြံ့ဖွတ် ဦးအောင်သိန်းလင်း ရဲ့ ပြောင်းဖူး ကြော်ညာ။...
မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့စမည့် အနုပညာ ရှင်များ မဲပညာပေးခရီးစဥ...
ပုသိမ်သူ ရှပ်ပြေးရေယာဉ် နစ်မြုပ်
မြင်းခြံ NLD အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးကို SB က ခြ...
ကြံ့ဖွတ် - ဦးအောင်သိန်းလင်း မှ တာမွေဈေး မပြောင်း...
ခလေးစစ်သားတွေ လက်ခံနေဆဲ မြန်မာစစ်တပ် ( ရုပ်သံ-သတင...
မြောင်းမြို့နယ် အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည...
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းက အသိမ်းခံ မြေကွက် တကွက် ၁...
ခရီးသွားရင်းကုသိုလ်ယူမယ် - ကျော်သူ
ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဂ် လိပ်စာအသစ် ပြောင်းလဲကြောင်း အသိေ...
လူသစ်၊ မူသစ်၊ အသွင်သစ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းစေလိုသည့် ရို...
သစ်ထူးလွင် ၀က်ဆိုဒ်အား မြန်မာအစိုးရမှ ပိတ်ဆို့ လိ...
မဲရုံအတွင်းသို့ မည်သည့် ကင်မရာ မှ ယူဆောင်ခွင့်မပြု...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ILO မှ သိန်းစိန်အစိုး ရအား နောက်သုံးနှစ်အထိ အဓမ္မ လ...
ပေးရင်ယူလိုက် ဒါပေမယ့် အန်အယ်ဒီကိုပဲ မဲထည့်ပါတဲ့ (...
ကမ္ဘာ့ ကဗျာနေ့ ဖြစ်မြောက်ရေး ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂ ဆွေးေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ဥက္ကဌ ဦးသိန်းညွှန့် နှင...
ကြံ့ဖွံ့က ပြိုင်ဘက် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ပုတ်...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)က လက်တော့ပ်ကိုင်မည့် မျု...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တ...
ပဒို မန်းငြိမ်းမောင် အထူးဧည့်သည်အဖြစ် နေပြည်တော်သိ...
မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူးအကြို မေဆွိ ရဲ့ ( စိတ်ကူးချယ်ရီ ...
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တန်ဖဲကျေးရွာရှိ ဒေသခံများကို မ...
မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ (Myanmar Journalists Union) ဖွ...
ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ထပ်မံတင်ြ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ် ၄၈...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိန္နီ ခရီးစဉ် (ရုပ်/သံ)
ဆရာ/ဆရာမတွေကို အကျပ်ကိုင်ပြီး ကြိုတင်မဲထည့်ခိုင်း ...
အစိုးရ ဌာနများ မီဒီယာအပေါ် တရားစွဲဆိုခြင်း ကိစ္စရပ်မ...
မြစ်ရေအရည်အသွေး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ဧရာဝတီမြစ် အထက...
တောတွင်း တဲထိုးနေထိုင်သည့် ချင်းလူမျိုးများ ကျန်းမ...
ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပါတီမဲဆွယ်တဲ့ တောင်ငူမြိ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှမ်းပြည်မြောက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရှိုးမြို့မှာ ပြောကြားသည့်မိန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လားရှိုး ခရီးစဉ် ( ရုပ်သံ-သတင်...
အသိမ်းခံ လယ်မြေပေါ်က လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝ ( ရုပ်သံ-သတင်း...
မော်လမြိုင်ကျွန်း မြို့နယ်မှာ အဓ္ဓမ ကင်းစောင့်ခိုင်...
ဦးအောင်မြင့်(ဘိုကလေး)ကို စိတ္တဇ ဆေးရုံသို့ မတရား ပ...
မအူပင်သားတွေ ကလဲ အမေ့ကို ချစ်ပါတယ် ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
The Dawn Art Festival ပန်းချီပြပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
၂၄ နှစ်မြောက် တံတားနီ အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအန...
ဒီလိုလေး ခြစ်တက်ရင် ရပြီ ( ရုပ်သံဖိုင် )
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ၏ မဲဆန္ဒရှင်ပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အောင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကွေးစည်းရုံးခရီးစဉ် ကွင်းရရှိရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှေ့ မေတ္တာရပ်ခံ သဘောထားဖေ...
ပြည်သူနဲ့ တွေ့တော့မီးလို ရန်သူနဲ့ တွေ့တော့....
ဆုံပွိုင့် စားသောက်ဆိုင်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ လာရှိုး ခရီးစ...
အကြောက်တရားများဖယ်ရှားကြ - ကျော်သူ
၂၄ နှစ်မြောက် မမေ့ပျောက်တဲ့ တံတားနီ အရေးအခင်း ( ရု...
အမေစုက လူထုကို ကားနဲ့ လိုက်စည်းရုံး - ဦးအောင်သောင...
မိုးစပါးစိုက်ဖို့ လယ်ပြန်ပြင်တာကို ပိုင်နက်ကျူးလွန...
အဓိဌာန် ရေစဉ်နဲ့ ရောဂါကုတဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်သုနန္ဒာ ( ရုပ...
သစ်တောဦးစီးဌာန တာဝန်ခံရဲ့အမြတ်တော်ခွန် ( ရုပ်သံ-သ...
လယ်သမားတွေ ၏ စုဆောင်းငွေတွေကို ပြန်လည် မထုတ်ပေးတဲ့...
လောင်းကစားဝိုင်း ဒိုင်ကိုင်နေတဲ့ ဇီးပင်ကုန်းကျေးရွ...
(၂၄) နှစ်မြောက် တံတားနီ အထိမ်းအမှတ် နှစ်ပတ်လည် အခမ...
စစ်ပွဲတွေ အားလုံးရပ် STOP THE WAR ( ရုပ်သံ-သတင်း )...
ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ထပ်မံ အသက်...
ခေတ်စနစ် နှင့် မညီတော့သော ဌာန အချို့ ဖျက်သိမ်းရန် ...
မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ်မည့်...
16-03-2012 ရက်နေ့ ( Facebook ) မှ သတင်းများ။
ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး။ ကျော်သူ ( သတင်း-ဆောင်းပါး )
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ တိုင်းရင်း...
ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ဒေါ်လာ ၁.၅...
မြစ်ဆုံ ဒေသခံများ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ထံ အသနား ခံစ...
ကိုဖုန်းမော်နေ့ အခမ်းအနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈...
၂၄ နှစ်မြောက် တံတားနီနေ့ အမှတ်တရ ကိုလှမျိုးနောင် ၏...
လောကအပြင်ကို ပံျ့လွင့်လာတဲ့ နရသိန်တွင်းက ဖန်တီးမှု ...
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံခြ...
၂၄ နှစ်မြောက် တံတားနီနေ့ အမှတ်တရ ( ရုပ်သံ-သတင်း )...
ခြောက်ထပ်ကြီး ဘုရားဝင်းအတွင်း ဇေယျသုခကာရီ ဘုန်းတော...
လူသေဆုံးသည် အထိ ကားတိုက်ခံရသော်လဲ လျော်ကြေး မရရှိသ...
ဒလမြို့နယ် မြေငှားရမ်း နေထိုင်မှု အခက်အခဲ - ရင်ဖွင်...
"လုံခြုံရေးအားနည်းချက် ကြောင့် ဖားကန့် ၌ မဲရုံ ၁ဝ ...
နာရေး ကူညီမှုအသင်းအား အသင်းမှတ်ပုံတင် ပြန်ချထားပေး
ဗိုလ်ကြီးတဦးက ဆိုင်ကယ်နဲ့ နောက်က ဝင်တိုက်ပြီး လက်...
The Voice Daily Newsletter ကို Email မှတဆင့် မှာယူ...
ဒေါ်စုခရီးစဉ်အတွက် ကြိုဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေ (အမှတ် ၃ မ...
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်...
အကြီးတန်းအရာရှိကြီးများ အများစု နေထိုင်ရာ မရမ်းကုန...
ပြည်တွင်းဘဏ် ၁၁ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အွန်လိုင်း...
မီဒီယာ လွတ်လပ်မှု ကန့်သတ်ခြင်းသည် တိုင်းပြည် တိုးတက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ရုပ်သံဟောပြောချက် မိ...
မတ်လ ၁၅၊ ၁၆ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို ပြန်လည...
ပြည်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လယ်ယာမြေ ပြဿနာများဆိုင်ရ...
ဝါးခယ်မမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး...
ကိုဖုန်းမော်နေ့ အခမ်းအနားတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်ေ...
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို NGO အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်...
၀န်ထမ်းတွေကို ကြံ့ဖွံ့က အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ခြိမ်းခြော...
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ပုံ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
ရွေးကောက်ပွဲဝင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တစည ကိုယ်စားလှယ်လေ...
အစိုးရ လခစားဝန်ထမ်းများ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ထော...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
မဲစာရင်းများတွင် မှားယွင်းနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေ...
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ေ...
၂၄နှစ်မြောက် ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း အောက်မေ့ဖွယ်...
The Voice ဂျာနယ် စာစောင် ထုတ်ဝေသူ နှင့် သတင်းရေးသာ...
ဂဠုန်ရုပ် တောင်ပံခတ်သည် ဟုဆိုကာ လူအများ လာရောက်ကြည...
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် စီရင်ချက်အပေါ် ကရင့် အသိုင်းအ၀ိ...
ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့် ထောင်...
ပြည်ထောင်စု ပြည်ထောင်စု 3D ( ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စာနယ်ဇင်း ရှင်း...
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အနုပညာရ...
လှည်းကူးမြို့ကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့...
စစ်ပွဲတွေ အားလုံးရပ် STOP THE WAR အနုပညာရှင်များ ၈...
အစိုးရက တပ်မတော်အပေါ် ထိရောက်စွာ မကြီးကြပ်နိုင်ဟု S...
လက်ဆင့်ကမ်းဒါနပွဲ ( သတင်း-ဆောင်းပါး ) ကျော်သူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောချက် ဗီဒီယိုဖိုင် ကြိုတင...
ညီနေမင်း ( နည်းပညာ ) ဆိုက်မှ လေ့လာစရာ ကွန်ပြူတာ ( ...
ရတနာပုံ တယ်လီပို့ မှ အီးမေးလ် သုံးစွဲသူများအတွက်ေ...
ဖုန်းမော် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပ။ ၈၈ မျိုးဆ...
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်စီးသူများ န...
နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအ...
ဆင်းရဲနွမ်းပါး ကလေးငယ်တွေကို မွန်မြတ်စေတနာ သွေးလှူ...
ဧရာဝတီတိုင်း မြို့အနှံ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်မဲဆွယ် နေတာ...
၂၄ နှစ်မြောက် ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးသည့်နေ့ အမှတ်တရ က...
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ လွှင့်ထုတ်မယ့် အမျိုးသားဒီ...
မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒ နယ်မြေတွေဆီ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နု...
မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့...
တိုင်ရီစက်ရုံ အခြေခံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ (ယာယီ) ဖွဲ့စည်...
ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မဲဆန္ဒရှင် ရပ်မိ/ရပ်ဖ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဆိုင်းဘုတ်တင် ရုံးခ...
မဲစာရင်း jပင်ဆင်နိုင်သည့်ရက် ထပ်မတိုးနိုင်ကြောင်း ...
သီလရှင်တပါး သံဃနာယက ဥက္ကဌ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် တန်ခ...
အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့သတင်းစာ ...
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဝင်များမှ နိုင်ငံပိုင် မြေကွက်များကို...
မကွေးNLD အောင်နိုင်ရေးဆိုင်ဘုတ် ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့ ဝင်...
ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် နှင့် ရွေး...
ယနေ့ မတ်လ ၁၂ ရက် နေ့မှာ အသက် ၈၂ နှစ်ပြည့် မဲ့ ဘဘ ဥ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှ အတည်ပြုပြီးပါက လူမှုဖူလုံရေး...
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းတွင်လည်း မဲပေးနိုင်သည့် အမည...
အနုပညာရှင်အချို့ အန်အယ်ဒီ ပါတီအတွက် စည်းရုံးရေး ဆင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ ...
"အငြိမ်းစားများ သတင်း" အကောင်းဆုံး သတင်းဓါတ်ပုံဆု ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တ...
လက်တော့ပ်ကိုင်မည့် မျိုးဆက်သစ်များ ( ဆောင်းပါးရှင်...
မြစ်ဆုံဆည် ပြန်စရေး တရုတ် ကုမ္ပဏီ လေသံပစ်
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ မိသားစု ၄င်းတို့ ပိုင် စ...
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီး ခဲ့သော လွှ...
ဧပြီလ(၁)ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု ရှိ၊ မ...
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြန်စဖို့ ရုတ် စွမ်းအင်ရင်းနှီး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မော်လမြိုင် မိန့် ခွန်း ( ရုပ်သ...
ပြိုင်ပွဲ - ဆောင်းပါးရှင်။ မောင်တင်ဦး (မြောင်းမြ)...
ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ အပစ်ခတ်ရပ်ရေး သ...
ဝန်ကြီးဌာနအချို့၏ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ အလွဲသုံးစားမှုမ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက် နေ့မှာ အသက် ၈၂ နှစ်ပြည့် မ...
ဘယ်သူ့ကို မဲပေးကြမှာလဲ ... (၂) ( ဆောင်းပါးရှင် -ေ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ အ...
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပဲ...
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ နှင့်အညီ စတင် ဖွဲ့စည...
အာဏာရှင်တွေတက်ရေး မတက်ရေး နှင့် ပေါ်လာရေး မပေါ်လာရေ...
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယနေ့ မွန်ပြည...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ခ...
မစုစုနွေးရဲ့မအူပင်မြို့နယ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစ...
SB တွေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဒလမြို့နယ် အန်အယ်ဒီ ရုံးဖွ...
ကမ္ဘာ့ ကဗျာနေ့ ကျင်းပဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကဗျာဆရာများ...
မဲစာရင်းတွင် သေဆုံးသူများ ပါဝင်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ အာဏာ တည်သည့်ရက် သတ်မှတ်လ...
ရောမနိုင်ငံ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ချီးမြင့်သော...
မအူပင်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မဲဆွယ်...
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယနေ့ မော်လမြ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်...
ဆုံးရှုံး နစ်နာသူရဲ့အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်အတွက် တကု...
ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်တဲ့အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာမ...
စစ်ပွဲကြီးတွေ ပြီးတဲ့အခါ ( ဆောင်းပါးရှင် - ထက်အောင...
အရှင် ဂမ္ဘီရ ကို KIO နှင့် ပတ်သတ်မှု ရှိ-မရှိ ခေါ်စစ်...
ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သူ စာရင်း ရယူရန် မိတ္တူကူးစက် သယ်ဆောင...
ကချင်စာပေ သင်ကြားခွင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်...
နိုင်/ကျဉ်း အုပ်စုတွေ အင်းစိန်ထောင်ကို စာအုပ် သွား...
Viper ဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ၍ ပြည်ပ သို့ ဖုန်း အခမဲ့ ...
မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဝင်း အတွင်းမှာ ဘြာေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင် ဟောပြေ...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် မတ် ၁၂ ရက်နေ့မှာ အသက် ၈၂ နှစ်ပြ...
ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှု နှင့် ဦးဂန္ဘီရအကြောင်း ပြော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွန်ပြည်နယ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရ...
ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ စာရင်း ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိ...
ခေတ်ကာလ အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီသော ဥပဒေများ ပြုပြင်ရ...
မဲစာရင်း ပြင်ဆင်နိုင်သည့် ရက်တိုးမြှင့်ပေးရန် NLD ...
တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူ ဦးစိုးကြွယ်နှင့် အခြား ၈ဦးအား...
မွန် အမျိုးသမီးများနေ့ ကို မော်လမြိုင်မြို့တွင် ပထ...
ABSDF က တာဝန်ရှိသူတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ ...
KIO/ KIA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ၉၉ ရာခု...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည့် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယာဉ်တန်း လုံခြုံရေးကား လောက်စာ...
7Day News သူရဲကောင်းဆုများ စတင်ချီးမြှင့် ( ဓာတ်ပံ...
ကြိုတင်မဲ မသမာမှုကို ချိပ်ပိတ် အမှတ်အသားဖြင့် ကာကွယ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေး-နေပြည်တော် မဲဆွယ်စည်းရု...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ် မျှတမည်ဟု ဦးသိန်းစိ...
NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စား...
ရေနံချောင်းမြို့မှာ အောင်ပွဲအလံ ဒေါင်းအလံ ပြန်စိုက...
သတ္တိရှိမှုကို ပြသနိုင်သလို စည်းကမ်းရှိမှုနဲ့ ညီညွတ်မ...
ဥပဒေအရ ကြိုတင်မဲပေးခွင့် ရှိသူမှအပ အခြား မဲဆန္ဒရှင်...
လွတ်လပ်သော အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတ...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးကြောင်...
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ အလွန်အကျွံ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျာ...
မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂမှေ...
နေပြည်တော်မှာ ဒီလှိုင်းဂျာနယ် ဖြန့်ဝေ ရောင်းချ
မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း မှားယွင်းမှုများ ပြင်၍မရနိုင်တော့ဟ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယာဉ်တန်း ဂျင်...
မော်လမြိုင်မြို့ သံလွင် ဥယျာဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မြန်မာသို့ လာမည်
"မြန်မာကျောင်းသား အများစု ပိုလီ ဝင်ခွင့် ငြင်းပယ်ခ...
"စစ်ဒဏ်ကြောင့် နှစ် ၄၀ခန့် စွန့် ခွာခဲ့ရသော ကျောက်...
ရောင်ချည်သစ် ပညာဒါနကျောင်း ဆရာကန်တော့ပွဲ..
ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲနေတာဟာ အုပ်ချုပ်မှု မမှန်တာကြောင့်လ...
မြောင်းမြ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် မန်...
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ ပြည့် BG သွေးလှူ ( ရုပ်...
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူတွေ အတွက် ဘယ်သူ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန...
07-03-2011 ရက်နေ့ ( Facebook ) မှ သတင်းများ။
ချင်း ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး တောင်ဖီလာ သဘေ...
ကသာမြို့ စည်ပင်ဈေး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါး
ဟင်္သာတမြို့ မှာ ယနေ့ နံနက် ဗုံးတလုံးထပ်မံတွေ့ ရှိ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် တို...
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ငွေလဲနှုန်းကို ဈေးက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိတ္ထီလာမြို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး...
မြန်မာ့ လေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ်ဘီးပေါက်
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် မကွေးတိုင်း စည...
အရှင်ဂမ္ဘီယ ကို အာဏာပိုင်များ လက်ထိပ်ခပ်ပြီး ဖမ်းဆီ...
မြောင်းမြတွင်လည်း မဲစာရင်းများ မှားယွင်းနေဟု NLDေ...
မြစ်ဆုံ တန်ဖဲ ရွာဟောင်းသို့ ပြန်လာသူများကို အာဏာပိ...
ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လာရောက်မည်
ပြည်သူတွေ အတွက် တပ်မတော်ကို စည်းရုံး လှုံဆော်သွားမယ...
ဖုန်းမော် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ပြုလုပ်မည်
လယ်သမားများရဲ့မြို့နယ် အဆင့် စည်းလုံးမှုတွေ ရရှိခဲ့...
ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် စာပေဟောပြောပွဲ
ကလေး သူငယ်တွေကို အသက်မပြည့်ပဲ စစ်မှုထမ်းခိုင်း
နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသား ကွန်ဖရင့် ဆိုင်ရာ သတင်းစာ...
မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာမှာ မှားယွင်းမှုတွေရှိ (...
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် သို့ အသနားခံတင...
အမျိုးသမီး အမှုဆောင် အများစုဖြင့် တိုင်ရီ သမဂ္ဂ ဖွဲ့...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ၆ ရက်နေ့ မန...
06-03-2012 ရက်နေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
မသူတော့် ကြောက်တွေး ( ကဗျာရှင် နေရဲနီ )
လားရိုး သိန်းအောင် ၏ မဲတပွင့်စီပေး ( တေးသီချင်း )
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေပြည်တော် ခ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ( ရုပ...
စိတ်လုံခြုံမှု ရှိဖို့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာ အရေြး...
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ခ...
လယ်ယာမြေ ပြဿနာများ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တခ...
ကမ္ဘာ့ ကဗျာနေ့ အစည်းအဝေး ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ပထမဆုံးအကြိမ် စင်မြင့်ထက်မှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဒဂုံမြိ...
05-03-2012 ရက်နေ့ ( Facebook ) ပေါ်မှ သတင်းများ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀၅-၀၃-၂၀၁၂ ယနေ့...
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကနေဒါမှာ ဆုလာယူဖို့ Rights And ...
ဒေါ်စု အားလာရောက်အားပေးသည့် ရဲဘော်ကျော်ဇင်ဝင်း အရေး...
ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီး ဖြစ်ခဲ့ရင်.............ကျော်သ...
ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ မိ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှု၌ ကိုမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးမြို့ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှ...
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဌကြီးရဲ့ လွတ်လပ်ပြီးတရားမ...
ပြည်သူလူထုသိန်း နှင့်ချီ ကြိုဆိုတဲ့ အမေစု ဇေယျာရွှေ...
မြန်မာ အစိုးရ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ကေအဲ...
မနေ့က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မန္တလေး...
ပျောက်ဆုံးသွားသော သားဖြစ်သူအတွက် ရတက်မအေးရသူ ဖခင်ြ...
အမေစု စစ်ကိုင်းခရီးစဉ် ပြည်သူတွေ သိန်းနှင့်ချီကြို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်ကိုင်းခရီးစဉ် ( ဓာတ်ပုံ-သတင်...
အမရပူရရှိ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ အသွား လူထုအား...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား မန္တလေး စေျး...
04-03-2012 ရက်နေ့ ( Facebook ) မှ သတင်းများ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၀၄-၀၃-၂၀၁၂ ခရ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေ...
တရားရုံးရဲ့အမိန့်ကြောင့် တိုင်ရီစက်ရုံ အလုပ်သမားတေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးခရီးစဉ် (...
ပင်လုံ စိတ်ဓာတ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ တန်ဖိုး ( ရုပ...
အားကစား ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း ၏ လာဒ်စားမှုများ ပေါ်ပြီ...
ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ မှဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် ဖြိုးကိုကိ...
ခွပ်ဒေါင်းမော်ကွန်း-NLD ပါတီစည်းရုံးရေး သီချင်းခွေ...
ဇလွန်မြို့နယ်မှ အဓမ္မငွေကောက်ခံခြင်းအား အရေးယူဆောင်...
၄၈ နေရာပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ အတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းမို...
ဦးဇေယျာသော် ၏ စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ
၈၈မျိုးဆက် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့ နှင့် E...
တာမွေမြို့ နယ် NLD လူငယ်တဦးအား တာမွေရဲမှ ခေါ်ယူစစ်...
မန္တလေးမြို့ လူထု ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် NLD မှ နှုတ်ခွန...
02-03-2011 ရက်နေ့ ( Facebook ) မှ သတင်းတိုများ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာ အသင်း မီဒီယာများ နှင့် တွေ့ဆံ...
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ အဖြစ် ဘ/က ကျောင်းတွေကို သွားရောက်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ကလော စည်းရု...
ကန့်သတ်နှောက်ယှက်မှုများ ရှိနေသေးကြောင်း NLD ပြော
သူလည်း ဝန်ထမ်း သားသမီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြ...
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ ကျောင...
ဟဲဟိုးမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးမှသာ...
မေခမြစ်ပေါ်က ချီဖွေရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း နောက်ဆက်တ...
Facebook Pages ဒီဇိုင်းအသစ် ပြောင်းမည်
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မိန်...